Inona no atao hoe Funimate ary ahoana no fomba ahazoana tombony betsaka amin'izany | Androidsis
Ignacio Sala | 21/07/2021 22:00 | Fampiharana Android, Tutorials
Ny horonan-tsary no filaharan'ny andro. TikTok, Instagram ary izao ny YouTube Shorts no nanjary fampiharana be mpampiasa indrindra, indrindra fa ny tanora, handefa horonantsary fohy, horonan-tsary izay vao mainka izy ireo, Izy ireo dia misy akony lehibe indrindra amin'ny tambajotra sosialy rehetra.
Na dia marina aza fa ny TikTok sy ny Instagram ary ny Shorts dia nametraka fitaovana maro isan-karazany hamoronana horonantsary am-boalohany miaraka amina mozika, ny isan'ny fiasa kosa dia ambany raha oharina amin'ny hafa. fampiharana noforonina mazava ho an'ny fanovana horonantsary fohy toa ny Funimate.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hifantoka amin'ity rindranasa manokana ity izahay, ny rindranasa iray dia manome antsika lahasa maro izay azontsika atao lasa mpanjaka amin'ny tambajotra sosialy raha manana faharetana sy fotoana ary saina isika.
1 Inona no atao hoe Funimate
2 Inona no natolotry Funimate antsika
2.4 Vokatry ny sarontava sy ny faharanitan-tsaina
2.5 Vokatry ny 100 mahery
2.6 Ampiasao ny mozika tianao
2.7 Hetezo ary hanambatra horonan-tsary
2.8 Atombohy ary atsaharo ny sarimiaina
2.9 Vokatry ny lahatsoratra
3 Ahoana ny fiasan'ny Funimate
4 Ohatrinona ny vidin'ny Funimate
Inona no atao hoe Funimate
Funimate dia mpamoaka horonantsary feno azo alaina amin'ny Android azontsika atao ny misintona maimaimpoana, ahitana doka sy fividianana ao anaty app, fividianana ahafahantsika mamaha ny fiasa rehetra misy eo amin'ny lampihazo ankoatry ny fanafoanana ny doka asehon'ny sehatra.
Miaraka amin'ny fisintomana mihoatra ny 10 tapitrisa ary hevitra mihoatra ny iray tapitrisa, Funimate dia manana salan'isa 4,3 kintana amin'ny dimy azo atao. Ity rindranasa ity dia manolotra fonosana maro an'isa ho antsika, izay mandraka ankehitriny, dia tsy azo atao afa-tsy amin'ny famoahana horonantsary birao.
Misaotra an'ity fampiharana ity dia afaka mamorona motera mahavariana, ampiasao tetezamita marobe, sarimiaina, velomina ny lahatsoratra, ampiasao sivana marobe hamoronana horonan-tsary mahavariana sy tsy manam-paharoa. Ho fanampin'izany, mamela antsika hanolo ny mombamomba ny horonan-tsary sy sary koa izy io ary hanampy sticker hamatsiana kokoa ny zavatra noforoninay.
Raha ny marina, ity dia iray amin'ireo Fampiharana fampiasa matetika hamoronana horonan-tsary ho an'ny TikTok noho ny fahatsorany, satria tsy mila manam-pahaizana amin'ny fanovana audiovisual ianao hanatanterahana ny hevitsika, na toa lavitra toa inona aza izy ireo.
Iray amin'ireo fiasa farany nampiana vao tsy ela akory izay ny fampiharana dia ny fampandrindrana molotra, mety tsara amin'ny fanaovana karaoke ireo hira tianao indrindra. fiasa iray tena mitovy amin'ny atolotry ny fampiharana Wombo.
Inona no natolotry Funimate antsika
Araka ny efa nolazaiko tetsy ambony, Funimate dia mametraka eo am-pelatanantsika asa marobe izay tsy hahatonga antsika tsy hahita na iray aza mpamoaka horonantsary be mpampiasa indrindra (Tsy miresaka Final Cut na Adobe Premiere no resahiko, satria mifaninana amina ligy tena hafa ireo).
Funimate dia manolotra antsika ny tranomboky misy azy miaraka amina stiker, sary ary rakotra maro izay hamonjy antsika, indraindray, ny asa sarotra amin'ny fanaovana mitadiava fanampiana ho an'ny horonantsarinay amin'ny alàlan'ny Internet.
Ilaina ny keyframes hamoronana horonan-tsary mahafinaritra, satria manome antsika fahaizan-javatra tsy ho hitantsika mihitsy ny mampiasa tetezamita fotsiny. Raha mbola tsy ampiasainao izy ireo, efa mandray ianao
Mba hanomezana fahatsapana fluidity an'ireo zavatra noforonintsika, indrindra rehefa manatevin-daharana horonan-tsary samihafa isika, ilaina izany raha toa na tetezamita. Ny isan'ny tetezamita ataon'i Funimate ho antsika dia tena avo lenta ary izy rehetra dia manana a mikasika matihanina. Soso-kevitra iray: arakaraka ny faharetan'ny fotoana maharitra amin'ny tetezamita no tsara kokoa raha tsy ampahany lehibe amin'ny horonan-tsary izy io.
Vokatry ny sarontava sy ny faharanitan-tsaina
Ny faharanitan-tsaina artifisialy dia misy ihany koa ao Funimate, faharanitan-tsaina artifisialy ahafahantsika manolo ny mombamomba ireo lahatsarinay ary, raha tsy izany, manampy effet maska ​​amin'ny fikitihana tena matihanina. Tsy miasa fahagagana ilay rindranasa raha ny amin'ny fanesorana ambadika iray. Arakaraka ny maha-homogeneous ny background no hananan'ny fampiharana azy mora kokoa ny manala azy ary manolo azy amin'ny sary hafa.
Vokatry ny 100 mahery
Raha tianao ny vokatra, miaraka amin'ny Funimate dia manana mihoatra ny 100 ny vokatra samihafa hampiasainao amin'ny horonan-tsarinao. Torohevitra iray: aza manararaotra ny vokany raha tsy izany ho afaka hifantoka amin'izy ireo ianao fa tsy amin'ny atiny.
Ampiasao ny mozika tianao
Miankina amin'ny toerana tianao ahantona ny zavaboarinao dia tsy maintsy jerenao ny zon'ny mpamorona ny hira izay hampiasanao. Amin'ny Funimate azonao ampiasaina misy hira izay efa nakarinao teo amin'ny fitaovanao.
Mikasika ny zon'ny mpamorona, Shorts avy amin'ny YouTube no safidy tsara indrindra satria mamela antsika hampiasa hira misy eo amin'ity sehatra ity amin'ny endrika horonantsary maimaimpoana tanteraka ary tsy misy olana amin'ny sehatra mba hahafahana manangona ny atiny amin'ny ho avy.
Hetezo ary hanambatra horonan-tsary
Mba hahombiazana sy mahasarika ny horonan-tsary, tsy azo anaovana fiaramanidina tokana fotsiny, ny idealy dia ny mampiseho fiaramanidina samihafa hanomezana firaisan-kina ilay horonan-tsary. Amin'ity lafiny ity, Funimate, amin'ny maha-fampiharana mendrika ny sira azy, dia mamela antsika hanapaka, hanapaka ary hanatevin-daharana horonan-tsary tsy misy olana ary amin'ny fomba tena tsotra.
Atombohy ary atsaharo ny sarimiaina
Raha te-hikasika matihanina ny zavatra noforoninao ianao dia tsy maintsy ampidiro lohanao roa miaraka amin'ny famaranana. Amin'io lafiny io, Funimate dia manolotra sarimiaina maro karazana ho ampio na amin'ny voalohany na amin'ny farany amin'ireo horonantsary noforoninay niaraka tamin'ny fampiharana.
Vokatry ny lahatsoratra
Hanao ahoana ny fampiharana fanovana horonantsary raha tsy mamela antsika hanampy sy hamolavola ireo lahatsoratra? Ity rindranasa ity dia manolotra antsika a endrika isan-karazany sy sarimiaina mba hanehoana an-tsoratra izay tiana holazaina na tsy azontsika lazaina amin'ny teny.
Ahoana ny fiasan'ny Funimate
Ny fiasan'ny Funimate dia tsotra dia tsotra, izay namela azy ho lasa iray amin'ireo fampiharana malaza indrindra hamoronana horonan-tsary ho an'ny TikTok. Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ny mifantina ny horonan-tsary na horonan-tsary tadiavintsika miray hina hamorona ny zavaboarintsika.
Avy eo isika dia afaka misafidy raha te-hanala ny faran'ny horonan-tsary isika ary hanolo azy amin'ny sary hafa, manampy lahatsoratra, taratasy fametaka, sivana na hafa amin'ireo safidy fanaingoana natolotry ny fampiharana.
Ny fiolahana mianatra Amin'ity fampiharana ity dia tsy dia avo loatra izy io, saingy mila fotoana fohy vao hahitana ny fomba fiasan'ny tsirairay amin'ireo asa omeny antsika.
Ohatrinona ny vidin'ny Funimate
Ny fampiharana Funimate dia azo alaina ho an'ny misintona maimaim-poana, ao anatin'izany ny doka sy ny fividianana rindrambaiko hanalana ny endri-javatra rehetra sy hanalana ny doka.
Raha vantany vao manokatra ny rindranasa voalohany ianao dia misy hafatra aseho izany manasa antsika hanao fifanarahana amin'ny famandrihana Funimate Pro, famandrihana iray izay vidiana amin'ny 3,99 euro isan-kerinandro.
Tsy ilaina ny manao fifanarahana amin'ny famandrihana afaka mampiasa ilay application. Mba hialana an'io hafatra io dia tsy maintsy tsindrio ny X izay aseho eo amin'ny zoro ankavanana ambony amin'ilay varavarankely.
Raha tsy mandoa ny famandrihana izahay, Tsy hanana fidirana amin'ny tsirairay amin'ireo fiasa isika Manolotra antsika izy io, fa ny misy kosa dia mihoatra ny ampy hanombohana mamorona horonantsary ho an'ny TikTok, Instagram ary Shorts indrindra. Raha hitantsika fa tianay ilay fampiharana dia azontsika atao ny mandinika ny mety fandoavana ny famandrihana.
Funimate: tonian-dahatsoratry ny horonantsary sy horonantsary
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Inona no atao hoe Funimate ary ahoana no fomba ahazoana tombony betsaka amin'izany
Ahoana ny fomba hametrahana ilay fameram-potoana amin'ny Instagram